Iiklasi ezintathu zeeNgcinga zezo zezoMntu ekupheleni komntu yayingu-capricorn, sagittary, scorpio.
Ubuntu buvela kwiingcambu ezimbini ze-latin, nge, ngokusebenzisa, kwaye unyana, isandi. I-Persona yayiyimask okanye isixhobo esasinxitywa ngumlingisi saza sathetha. Ke sifumana igama elithi. Ubuntu bomntu, into leyo eyakhiweyo kwaye ngoku esetyenziswe bubuntu obuhlukeneyo, ingqondo ephezulu, imana, yokunxibelelana nehlabathi, ayingowamaxesha akutshanje. Imvelaphi yayo ilele ekuqalekeni kwembali yehlabathi.
Igama elithi ubuntu lisetyenziswa ngokungakhethi cala luluntu kwanoososophists abafanele bawazi umahluko, kuba benza umahluko phakathi kobuntu kunye nobuntu. Ubuntu ayisiyonto eyodwa, into elula okanye into; Luyinxalenye yezinto ezininzi, iimvakalelo kunye nemigaqo-nkqubo, ethi ihlangane ibe nye. Nganye yezi zinto ithathe iminyaka ukukhula. Kodwa nangona ubuntu benziwe ngamalungu amaninzi, ukudalwa kwabo kubangelwa ikakhulu yimithombo emibini, ingqondo yengqondo, okanye ukuphefumla (♋︎), kunye nengqondo yokuziqonda, okanye bubuntu (♑︎).
Kuhlala kulungile ukubonisana ne-zodiac xa ujongene nawo nawuphi na umbandela onxulumene nendoda, kuba i-zodiac yinkqubo eyakhiwa ngumntu. Xa i-zodiac sele ixabisekile umntu uyakwazi ukufunda ngayo nayiphi na inxenye okanye imigaqo-siseko yomntu okanye yendalo ngokomqondiso othile. Zonke izibonakaliso ezikwisiqingatha esisezantsi se-zodiac zinento yokwenza nobuntu, kodwa imiqondiso yomhlaza (♋︎) kunye ne-capricorn (♑︎) ngabadali bayo bokwenyani. Bonke ubuntu obungazithembanga buvela kumhlaza (♋︎); yonke into ekrelekrele ngokuqonda ubuntu ivela kwi-capricorn (♑︎). Makhe ngokufutshane silande imbali yobuntu kusetyenziswa zodiac.
Njengoko kuchaziwe kumanqaku angaphambili kwi-zodiac, umhlaba wethu umele umjikelo wesine okanye ixesha elikhulu kwindalo. Kweli xesha lesine ubuhlanga obukhulu okanye iimpawu zobuntu ziya kuphuhliswa. Iine kwezi ntlanga (♋︎, ♌︎, ♍︎, ♎︎) zidlulile kwixesha lazo, kwaye zonke kodwa iimali zesine zichithile. Olwesithathu olukhulu ugqatso (♏︎) ngoku luphuhliswa ngokwamacandelwana alo kwihlabathi liphela. Sikumdyarho wesihlanu (♏︎) wesihlanu weengcambu zohlanga (kwakhona ♏︎). Ukulungiselela kunye nokuqala komdyarho wesithandathu uyaqhubeka eMelika. Olokuqala ugqirha-luhlanga ngumhlaza (♋︎).
Umzobo 29 uphinda uveliswe kwinqaku langaphambili ukuze ukuphuculwa kohlanga kuqondakale ngokucacileyo kwaye indawo yabo kwinkqubo ye-zodiac ibonakale. Ngale nto unokulandela ulwandlalo lobuntu, ngakumbi unxibelelwano lwayo kunye nobudlelwane beempawu zomhlaza (♋︎) kunye ne-capricorn (♑︎). Umzobo 29 bonisa umjikelo wethu wesine ngeengcambu zawo ezisixhenxe kunye nohlanga olungaphantsi. I-zodiacs nganye incinci imele ubuhlanga, kwaye nganye yezi ibonakaliswa ukuba ibe nayo imiqondiso okanye imidyarho engezantsi komgca othe tyaba.
Ugqatso lokuqala luboniswa ngumhlaza womqondiso (♋︎). Izidalwa zohlanga olo yayiyimiphefumlo. Babengenazo iindlela ezinje ngobuntu bethu. Yayingamabala okuphefumla anjengekristale. Zaziziindidi ezisixhenxe, iiklasi, iiodolo okanye umoya wokuphefumla, uhlobo ngalunye, udidi okanye ucwangco, ziyipateni efanelekileyo kolo hlobo lwazo lwexesha elizayo, kunye nolwahlulo lolo hlanga. Olu luhlanga lokuqala aluzange lufe njengoko ubuhlanga belandela; ibiyilo kwaye ilugqatso olufanelekileyo abo balulandelayo.
Ekuqalisweni kwethu, kwesesine, kumjikelo, umhlaza (♋︎) weqonga lomhlaza wokuqala (♋︎) walandelwa yi-leo (♌︎) isikhundla esiphambili sesahlulo sesibini sohlanga lokuqala, njalo njalo ngo ezinye ii-hierarchies ezimelwe yimpawu zazo i-virgo (♍︎) kunye ne-libra (♎︎), iscorpio (♏︎), sagittary (♐︎), kunye ne-capricorn (♑︎). Xa umthendeleko wenqu (♑︎) yomkhosi wokuphefumla (♋︎) ufikile, obonakalise ukuvalwa kwexesha labo, i-capricorn (♑︎) iyinto elungeleleneyo kulo lonke ugqatso, kunye nomphelelisi womhlaza (♋︎) wolawulo Olo gqatso lokuqala, zombini zikwindiza enye.
Xa ulawulo lwesine, i-libra (♎︎), yomjaho wokuphefumla (was) yayinamandla, baphefumlela ngaphandle kwaye babeka kubo ubuhlanga yesibini yesibini enkulu, ubomi (♌︎), obugqitha kumanqanaba asixhenxe okanye amanqanaba njengoko iphawulwe ziihercyti zokomoya (2). Kodwa lo mphefumlo (♋︎) wawuphawu lomphefumlo uphela (♋︎) ugqatso, olwesibini, ubomi (♌︎) ugqatso, lwalulawula ubomi bonke (♌︎) ugqatso. Xa umdyarho wesibini okanye wobomi (♌︎) sele ulufikile uphawu okanye inqanaba lokugqibela (♑︎) ugqatso, ngokungafaniyo nohlanga lokuqala, lwanyamalala luphela. Xa ke, ugqatso lobomi, sele lufikelele kwinqanaba ♎︎, yaqala ukukhupha ugqatso lwesithathu olwaluhlobo (♍︎) ugqatso, kwaye njengoko iintlobo zohlobo lwefom zikhutshelwa lugqatso lobomi, ubomi (♌︎ ) ugqatso lwangenwa ngabo. Amaqela amabini okuqala oluhlanga (♍︎) ugqatso ayelumlo, njengoko lwalunjalo isahlulo sokuqala sesithathu (race) salo mdyarho. Kodwa kwinxalenye yokugqibela yolo hlanga lwesithathu baba bomeleleyo kwaye ekugqibeleni babomzimba.
Uhlanga lwesine, u-(♎︎) ugqatso, lwaqala phakathi kohlanga lwesithathu okanye u-♍︎. Umdyarho wethu wesihlanu, umnqweno (♏︎), waqala phakathi koluhlu (lwesine) kwaye wadalwa yimanyano yezesini. Ngoku, ukubona unxibelelwano phakathi kohlanga lwesine nolesihlanu kunye nomdyarho wokuqala ofanelekileyo, nalapho simi khona kuphuhliso.
Njengokuba ugqatso lokuqala luphefumlela owesibini, ugqatso lobomi (♌︎), ukuba lube khona, ke ngoko ugqatso lobomi belandela loo mzekelo bawubekayo, bakhupha ugqatso lwesithathu oluye lwenza iifom. Ezi fomu zazifudula zinobunkunkqele, kodwa ngokuthe ngcembe baba bomzimba njengoko zisondela okanye zifikelela kwinqanaba labo. Iifom zabo ke ezazibizwa ngoku ngabantu, kodwa ingekuko de kube kuqale ugqatso lwesine, ngaba bazivelise ngokuzala. Umdyarho wesine waqala phakathi kugqatso lwesithathu, nanjengoko ugqatso lwethu lwesihlanu luzalwe phakathi kugqatso lwesine imizimba yethu iveliswa ngendlela efanayo.
Ngala maxesha, imigama yokuphefumla yomdyarho wokuphefumla ubukele kwaye wanceda kuphuhliso lohlanga ngalunye ngokwesikhundla salo esifanelekileyo kunye nangokweqanaba lolawulo oluphezulu. Umdyarho wokuphefumla awuzange uphile emhlabeni omdaka njengoko imizimba yethu isenza; Bahlala kwisakhiwo esenze kwaye esingqonge umhlaba. Ubomi babukho ngaphakathi kwendawo yokuphefumla, kodwa bawujikelezile umhlaba. Njengoko ubomi buqala ukukhula buye bukhula imizimba, ulwalamano lwe-virgo (hi) lomphefumlo (♋︎) ugqatso olucingelwayo ukusuka kwinqanaba apho ugqatso lobomi lwanyamalala okanye lwalungeniswa khona. Iifom ze-astral eziqikelelweyo zihlala kwindawo yangaphakathi ebomini, enokuhambelana nemeko yomhlaba. Njengoko besiba bomelele kwaye bomelele, baphila, njengathi, emhlabeni oqinileyo. Indawo yokuphefumla xa iyonke inokutshiwo ngokuba ngootata babantu, eyaziwa kwi-Secret Doctrine njenge "bharishad pitris." Kodwa njengoko kukho uninzi lwamabakala okanye amabakala "ootata" siza kuyibiza le klasi ikhuphe imo engenangqondo. Yenza iklasi ye-virgo (♍︎) okanye isikhundla sehharishad pitris. Iifom ezibufunxa ubomi njengoko bezenza kwaye zizala ngokwazo ngokugqitha kwimetamorphosis i-analogous kunebhabhathane. Kodwa iifom ezivelisiweyo, ngokuthe ngcembe ziphuhliswa amalungu ezesondo. Ekuqaleni ibhinqa njenge virgo (♍︎), kwaye ke, njengoko umnqweno wabonakaliswa, ilungu lobudoda laphuhliswa kwezo fomu. Emva koko baveliswa yimanyano yezesini. Okwethutyana oku kumiselwa ngokwexesha lomjikelezo, kwaye kulawulwa ngohlanga olufanelekileyo lomdlalo wokuphefumla.
Ukuza kuthi ga kweli xesha, umntu wayenomzimba ngaphandle kwengqondo yomntu. Iifom zazingumntu ngokuma kwazo, kodwa kuzo zonke ezinye iinkalo yayizizilwanyana. Babekhokelwa yiminqweno yabo eyayisilwanyana esisulungekileyo; kodwa, njengakwizilwanyana ezisezantsi, umnqweno wabo wawungowohlobo lwabo kwaye ulawulwa yimijikelezo yamaxesha onyaka. Babezizilwanyana zendalo ezisebenza ngokobunjani bazo kwaye zingenazintloni. Babengenangqondo ngokuziphatha kuba bengazi ukuba benze ntoni ngaphandle kokuvuselelwa yiminqweno yabo. Le yayiyimeko yobuntu obuphathekayo njengoko kuchaziwe eBhayibhileni njengomyezo we-Eden. Ukuza kuthi ga kweli xesha umntu-izilwanyana ezibonakalayo wayenayo yonke imigaqo-nkqubo yethu ekhoyo ngoku, ngaphandle kwengqondo.
Kwangoko ugqatso lokuqala luphefumlela owesibini okanye ugqatso lobomi, kwaye ugqatso lobomi lwavelisa ukhuphiswano lwesithathu oluqhubeke kwiifom. Ke ezi fomu, zomeleza kwaye zifumana ugqatso lobomi, zakha imizimba yenyama zijikeleze zona. Emva koko unqwenela ukuvuka kwaye usebenze ngaphakathi kweefom; ngaphandle koko kusebenza ngaphakathi. Umphefumlo uphefumlela umnqweno, umnqweno unika ubomi ebomini, ubomi buhlala busesimweni, kwaye buyenza into engekhoyo emzimbeni. Elinye lala mizimba okanye imigaqo-nkqubo yizwi elipheleleyo lokubonisa iintlobo ezifanelekileyo zomoya wokuphefumla, nganye nganye ngohlobo lwayo.